Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyga Ee Maanta %
By Ramzi Yare	 Last updated Jun 7, 2020
Kooxaha qaarkood oo Chelsea ka mid tahay ayaa ku dhowaaqay heshiisyadoodii ugu horreeyey bishan June, laakiin si guud suuqa iibka ciyaartoyga ayaan loo furin, waxaana la filayaa inuu dib uga dhaco waqtigii ay FIFA sida rasmiga ah albaabada ugu furi jiray, sababtuna waxay tahay in horyaallada dalalka Yurub ay intooda badan bishan dib u furmeen haddana waxay kooxuhu samaynayaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay kula sii heshinayaan ciyaaryahannada kusoo biiraya marka ay ciyaaruhu dhamaadaan.
waxa aan halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee maalinlaha ahaa, ee dhaqdhaqaaqa kooxaha, xanta aan sida buuxda dibedda ugu soo bixin iyo ciyaartoyda lala xidhiidhinayo kooxo kale.
Halkan ka akhriso warrarkii ugu dambeeyey ee suuqa iibka ka qoreen wargeysyada waaweyn ee qaaradda Yurub:
Barcelona waxay wada-hadallo la furaysaa kabtankeeda Lionel Messi oo 32 jir ah iyo goolhaye Marc-Andre ter Stegen oo 28 jir ah, si ay heshiiskooda u kordhiyaan. (Mundo Deportivo)
Manchester United ayaa qorshaynaysa inay amaah ku dirto garabkeeda weerarka ee Daniel James oo ah 22 jir u dhashay Wales, laakiin marka hore waxay ka saxeexi doontaa heshiis cusub. (Sun on Sunday)
Bartilmaameedka Manchester United iyo Chelsea ee Federico Chiesa ayay kooxdiisa Fiorentina u sheegtay inuu tegi karo. Mulkiilaha kooxda ayaa sheegay in 22 jirkan Talyaaniga ah uu ku bixi karayo qiimaha ay iyagu u go’aamiyaan. (Football Italia)
Everton ayaa hoggaaminaysa tartanka loogu jiro 25 jirka khadka dhexe ee reer France ee Adrien Rabiot oo u ciyaara Juventus, kaas oo ciyaartiisii ugu horreysay ee Paris St-Germain uu Carlo Ancelotti safay sannadkii 2012. (Tuttosport)
Chelsea ayaa ugu yaraan toddoba kooxood kala kulmaysa tartan difaaca ay doonayso ee reer England ee Ben Chilwell oo ah 23 jir ka tirsan Leicester City. (Sunday Mirror)
Arsenal iyo Wolves ayaa xiisaynaysa 25 jirka Talyaaniga ah ee difaaca uga ciyaara Juventus ee Daniele Rugani oo ku dhibaatooday inuu boos ka helo safka tababare Maurizio Sarri. (Tutto Sport)
Wolves waxay bartilmaameed ka dhiganaysaa laacibka khadka dhexe uga ciyaara Paris St-Germain ee Idrissa Gueye oo ah 30 jir u dhashay Senegal. (Sunday Express)
Liverpool ayaa u dhaqaaaqday garabka weerarka Wolves ee reer Spain ee Adama Traore oo 24 jir ah. (Sunday Mirror)
Real Madrid ayaa dalab 80 milyan oo Euro ah ka gudbisay laacibka Bayer Leverkusen ee Kai Havertz, waxaana saxeexa kaddib ay ogolaanaysaa inuu sii joogo kooxdaas muddo sannad ah ka hor inta aanu u dhaqaaqin Santiago Bernabeu. (ESPN)
Manchester United ayaa dardar gelinaysa damaceeda kubbad-sameeyaha Ajax iyo xulka Netherlands ee Donny van de Beek oo 23 jir ah. (Sunday Times)
Khadka dhexe ee Aston Villa iyo xulka England ee Jack Grealish oo 24 jir ah ayaa kaalinta koowaad ee ciyaartoyga ay la saxeexanayso Man United kala baxay Jadon Sancho oo 24 jir ah. (Sunday Mirror)
Chelsea waxay dhegaysan haddii dalabyo laga soo gudbiyo dhawr ciyaartoy oo kooxdeeda ka tirsan maadaama ay kusoo waajahan yihiin labada wsaxeex ee Hakim Ziyech oo ah 27 jir reer Moroco ah iyo Timo Werner oo ah 24 jir Jarmalka u dhashay oo ay kala soo saxeexatay RB Leipzing. (Daily Star Sunday)
Agaasimaha fulinta RB Leipzing ee Oliver Mintzlaff ayaa dafiray in Chelsea ay heshiis £53 milyan oo Gini ah la gaadhay Werner. (Sky Sports Germany)
Tababaraha Liverpool, Jurgen Klopp ayaa ku sifeeyey Havertz iyo Werner inay yihiin ciyaartooyo wanaagsan, laakiin wuxuu qiray in saamaynta Korona Fayrasku aanu suurtogal uga dhigaynin inay lasoo saxeexdaan. (Sky Sports)